စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နေသော စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ – HI Burma
Home	ဆောင်းပါးသတင်းဆောင်းပါး	စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နေသော စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ
စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နေသော စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ
“အမရေ…အမရေ…လူမှုကူညီမှုအသင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ လူနာတင်ယာဥ်ကို အမြန်ဆုံးခေါ်ပေးပါ” ဆိုသော အမျိုးသမီး တစ်ဦး၏ အသံကြောင့် ဒေါ်မစောယိုင်မှာ ပျာယာခတ်သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အကူညီတောင်းခံသော အသံကိုကြားကတည်းက စခန်းထဲမှလူတဦးဦး အရေးပေါ်အခြေနေဖြစ်နေပြီ ဆိုသည်ကို ဒေါ်မစောယိုင် သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဖုန်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ကို ကဗျာကယာရှာဖွေကာ လူမှုကူညီရေးအသင်းကို ဖုန်းဆက်၍ လူနာတင်ယာဥ်ကို ငါးစိုင်းရိုင်းချောင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသို့ လာရောက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
လူနာတင်ယာဥ်ကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဒေါ်မစောယိုင်မှာ စခန်းထဲရှိ လူတစ်ချို့ကို ခေါ်ယူစုဝေးလိုက်ပြီး အရေးပေါ်လူနာကိုအကူအညီပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရပြန်သည်။ လူနာအတွက် လိုအပ်သည့် ဆေးဖိုးဝါးခကိုမျှဝေအကူအညီပေးကြသည့် ဘဝတူစစ်ရှောင်များထံမှ တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ်သုံးရာ၊ ငါးရာ စသဖြင့်ကောက်ခံပေးကာ ရလာသည့်ငွေကို လူနာရှင်ထံလွှဲပြောင်းပေးရသည်။
ထို့နောက် အိပ်ယာခင်း၊ စောင်နှင့် ခြင်ထောင်များအပါအဝင် ဆေးရုံတွင်လိုအပ်မည့်အရာများကို မမေ့ဖို့ သတိပေးရင်းလူနာကို ကားပေါ်ရောက်သည်အထိ တာဝန်ယူကြီးကြပ်ခဲ့ရသည်။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ ငစိုင်းရိုင်းချောင်းဘုန်းကြီးကျောင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဗိုက်နာ၍ မီးဖွားရန် ၎င်းကိုအကြောင်းကြားလာသည့်အခါ စီမံရသည့် အခြေနေကို ဒေါ်မစောယိုင်က ပြန်ပြောပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအစီအမံများကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် မိခင်သည် ကလေးကို ကောင်းမွန်စွာ မွေးဖွားနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဒေါ်မစောယိုင်က ဖြည့်စွက်၍ ပြောသည်။
“စစ်ဘေးရှောင်စခန်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကလေးမမွေးနိုင်ရင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေကို ဖုန်းအဆက်အသွယ်လုပ် ပေးရတယ်။ ကလေးမွေးဖို့ ငွေရေးကြေးရေးအဆင်မပြေလို့ရှိရင် ကိုယ့်စခန်းက လူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ပိုက်ဆံ ၃၀၀၊ ၅၀၀ ကောက်ခံပြီးတော့ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ကလေးမွေးမယ့်မိခင်အတွက် နည်းလမ်းတွေရှာရတယ်။” ဒေါ်မစောယိုင်က ပြောသည်။
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ဒေါ်မစောယိုင်မှာ စစ်တွေမြို့ ငါးစိုင်းရိုင်းချောင်းဘုန်းကြီးကျောင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းရှိ လူဦးရေ ၁၆၀ ကျော်ကို စီမံခန့်ခွဲနေရသည့် စစ်ရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။
ဒေါ်မစောယိုင်မှာ ငါးစိုင်းရိုင်းချောင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင် ခိုလှုံနေသည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း စစ်ရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်မှာ လေးလလောက်သာရှိသေးသည်ဟု ဆိုသည်။ သူ့မတိုင် ခင်ကလည်း အဆိုပါစစ်ရှောင်စခန်း၏ ခေါင်းဆောင်မှာလည်း အမျိုးသမီးပင်ဖြစ်သည်။ စခန်းခေါင်းဆောင်နေရာ အပြောင်း အလဲအတွက် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနှင့် စစ်ဘေးရှောင်မိသားစုများ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ဒေါ်မစောယိုင် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
“ကျမတို့ကို စခန်းတာဝန်ခံအဖြစ်ရွေးချယ်တာကတော့ စခန်းမှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေက ဖြစ်ပါတယ်” ဒေါ်မစောယိုင်က ဆိုသည်။
စစ်ရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် စခန်းထဲရှိ လူများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် နေထိုင်စားသောက် ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ တင်ပြပေးရသည်ဟု ဒေါ်မစောယိုင်က ဆိုသည်။
“စေတနာနဲ့လုပ်တဲ့အတွက် ပင်ပန်းသလိုမခံစားရဘူး။ တခါတလေ ကိုယ်ပြောပြတာတွေကို သဘောမပေါက်ရင် စိတ်တိုရ တာတွေရှိတယ်။ စခန်းတာဝန်ခံဆက်မလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်”ဟု ပြောပြသည်။
ထို့အပြင် စစ်ရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် စစ်ရှောင်အချင်းချင်း စကားများရန်ဖြစ်ကြသည့် အခါတွင်လည်း စေ့စပ် ညှိနှိုင်းပေးရန်တာဝန်ယူရသည်။ သို့သော် စစ်ရှောင်အချင်းချင်း စကားများခြင်း၊ ရန်ဖြစ်ခြင်းမှာ မရှိသလောက်နည်းကြောင်း ဒေါ်မစောယိုင်က ပြောသည်။
“ငယ်ငယ်တည်းက အတူနေလာကြတဲ့သူတွေမဟုတ်တော့ ပြသနာက အနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိကြတာပဲ” ဟု သူကဆိုသည်။
ငါးစိုင်းရိုင်းချောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင် ဒေါ်မစောယိုင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည်က လပိုင်းသာရှိသေးသော်လည်း သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုများကို သဘောကျသည်ဟု အဆိုပါစခန်းက အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မခင်သန်းကဆိုသည်။ စစ်ရှောင်စခန်း ခေါင်းဆောင်သည် တရားမျှတမှုရှိပြီး တခြားစစ်ရှောင်များနှင့် အတူအတူ ထောက်ပံ့မှုရရှိသည်ဟုလည်း၎င်းက ပြောသည်။
“သူကကောင်းပါတယ်။ အစစအရာရာ ကူညီပေးတယ်။ မိန်းမသားဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခက်ခဲကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောလို့ရတာပေါ့” ဟု ဒေါ်မစောယိုင် အပေါ် မခင်သန်းကမှတ်ချက်ပေးသည်။
အလားတူ အမျိုးသားစစ်ဘေးရှောင်တစ်ဦးကလည်း “စခန်းမှာက ရွာပေါင်းစုံကလူတွေရှိတယ်။ စခန်းခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီး ကတော့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရွာ၊ သူ့ရွာ မခွဲခြားဘူး။ တန်းတူလုပ်ပေးတယ်။ စစ်ရှောင်စခန်း ခေါင်းဆောင်ဆိုပေမယ့် ထောက်ပံ့မှုတွေကို တခြားစစ်ရှောင်တွေနဲ့ အတူတူပဲ ယူတယ်”ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့ နှစ်နှစ်ကျော်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် အိုးပစ် အိမ်ပစ်ဖြင့် ထွက်ပြေးရသူ နှစ်သိန်းနီးပါးရှိသည်ဟု ဒေသတွင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များက ခန့်မှန်းကြသည်။ မြို့နယ်အသီးသီးတွင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းပေါင်း ၁၄၈ ခုရှိခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် စခန်းတာဝန်ခံအများစုမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ကြပြီး အမျိုး သမီးခေါင်းဆောင်မှာ လက်ချိုးရေတွက်၍ ရသည့်အနေအထားဖြစ်သည်။
ထိုသို့ စစ်ရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးများထဲတွင် ကျောက်တော်မြို့နယ် ဝါးတောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင် မြိုအမျိုးသမီး ဒေါ်မလှဦးလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်မလှဦးသည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ဝါးတောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး စစ်ရှောင် စခန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် လက်ရှိအချိန်ထိ တာဝန်ယူထားသူဖြစ်သည်။
“စစ်ရှောင်စခန်းမှာ နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက လုံခြုံမှုလုံးဝမရှိဘူး။ ရေချိုးဖို့အတွက် ချောင်းကိုဆင်းရတယ်၊ ချောင်းထဲမှာက အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး အတူတူရေချိုးရတယ်၊ အဲလိုအခြေနေမျိုးမှာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အဆင်မပြေကြဘူး။ ရေချိုးရတာတစ်ခုတည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး စစ်ရှောင်စခန်းမှာရှိတဲ့ ယာယီတဲတွေက အမျိုးသမီးတွေအတွက် မလုံခြုံပါဘူး၊” ဟု သူမတာဝန်ယူထားရသည့် စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၏ အနေအထားကို ပြောပြသည်။
ထို့အပြင် ဒေါ်မလှဦးအနေဖြင့် စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ကူညီထောက်ပံ့မှု မရသည့်အချိန်တွင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် စဥ်းစားထားချက်များလည်း ရှိသည်ဟု ပြောပြသည်။ အဆိုပါ စဥ်းစားချက်မှာ မိုးမကျမည် ယာယီတဲများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် သစ်နှင့် ဝါးတချို့ကို အနီးအနားရှိ တောင်များမှ ခုတ်ယူစုဆောင်းထားရန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်မလှဦး တာဝန်ယူထားသော ဝါးတောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင် မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြံစည်ခံရသည့်ဖြစ်စဥ်များရှိခဲ့ပြီး သူမအနေဖြင့် သေသေချာချာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်ဟု ပြောသည်။
“စခန်းထဲမှာ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ကြံစည်တဲ့ ဖြစ်စဥ်တွေရှိခဲ့တယ်။ လက်ရှိမှာကလည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဖြစ်နေတယ်၊ စစ်ကောင်စီကိုပဲတိုင်ရမလား၊ အေအေကိုပဲတိုင်ရမလားဆိုပြီးတော့ ဖြစ်တယ်၊ အဲလိုအခြေနေတွေကြောင့် တစ်ချို့ ကိစ္စတွေက ပေါ်ထွက်မလာဘဲ တိမ်မြုပ်သွားတယ်။ အဲလိုအခြေနေမျိုးမှာ ကျမတို့ရိုးရာဓလေ့အတိုင်း ဖြေရှင်းလိုက်ရတာလည်းရှိတယ်၊ တစ်ချို့လည်း တရားဥပဒေနည်းလမ်းအတိုင်း ဖြေရှင်းရတာလည်းရှိတယ်”ဟု ပြောပြသည်။
ထို့အပြင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင်သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထက်ပင်ပိုမိုများပြားသည့် တာဝန်များယူကြရကြောင်း ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ တောင်မင်းကုလား စစ်ဘေးရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင် ဒေါ်အေးအေးခိုင်က ပြောသည်။
“ရွာမှာက အိမ်ထောင်စု သုံးဆယ်လောက်ပဲ။ ဒီမှာက အိမ်ထောင်စု တစ်ရာကျော်ရှိတယ်။ သူတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရတာက ပိုပင်ပန်း တယ်”ဟု ဒေါ်အေးအေးခိုင်က ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း ဒုက္ခရောက်နေသူအချင်းချင်း တတ်နိုင်သည့်ဘက်က ကူညီရခြင်းကို ဂုဏ်ယူမိသည်ဟု ၎င်းကပြော သည်။
စစ်ဘေးရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူထားရသည့် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များထက် စိန်ခေါ်မှုပိုများ နိုင်သော်လည်း စခန်းရှိအမျိုးသားများကိုပါ စီမံကွပ်ကဲနိုင်သည့် အရည်အချင်းကို လေးစားမိသည်ဟု ဘူးသီးတောင်မြို့ လမ်းမကျောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင် ဦးကျော်ဝင်း ကပြောသည်။
“ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေက ပိုပြီးသိမ်မွေ့ကြတယ်။ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ မိခင်တွေအတွက် ပိုပြီးအားကိုးအားထားရတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ရခိုင်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများတွင် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များရှိနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် မည်သည့်ကဏ္ဍကပါဝင်နိုင်သည်ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားပေးရန် လိုအပ်နေသည်ဟု ရခိုင့်ရှေ့ဆောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စောစံငြိမ်းသူက ပြောသည်။
“လူအုပ်စုထဲမှာလည်း တော်တဲ့တတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အဲဒီလူ အုပ်စုတွေကိုက ဘယ်လိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုပါဝင်လာအောင် စဥ်းစားမလဲဆိုပြီး ကျွန်မတို့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပေါ်လစီချမှတ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်”ဟု မှတ်ချက် ပြုသည်။
ထိုသို့မူဝါဒပေါ်လစီများချမှတ်ရမည်မှာ ရခိုင်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်းတွင် မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းများကို အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ အနေအထားအရ အဆိုပါပေါ်လစီများချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမှာ မလွယ်သေးဟု ဒေါ်စောစံငြိမ်းသူက ဆက်ပြောသည်။
အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှုများရှိနေခဲ့သော်လည်း ငစိုင်းရိုင်းချောင်းဘုန်းကြီးကျောင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းခေါင်းဆောင် ဒေါ်မစောယိုင်က သူ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပြီး စခန်းထဲရှိ မြေကွက်လပ်တွင် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြရန် စစ်ဘေးရှောင်များကို ဆော်ဩနေသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း အဆမတန်ကုန်ဈေးနှုန်းမြှင့်တက်နေခြင်းကို မိမိနေရပ်ဆီမည်သည့်အချိန်တွင် ပြန်ရမည်ကို တိတိကျကျမသိသေးသော စစ်ဘေးရှောင်များ ကြုံလာရနိုင်သည့်အတွက် စခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ရမည်ဟု ဆိုသည်။
ပွင့်လင်းရာသီတွင် သောက်ရေရှားပါးမှုကြုံတွေ့နေရသော စစ်တွေမြို့ ငါးစိုင်းရိုင်းချောင်းဘုန်းကြီးကျောင်း စစ်ဘေးရှောင် စခန်းအတွက် သောက်ရေ လုံလုံလောက်လောက်ရရှိရေးအတွက် ကြိုးစားနေပုံကို ဒေါ်မစောယိုင်က “ကျမတို့စခန်း မှာ သောက်ရေကရှားတယ်။ သောက်ရေလုံလုံလောက်လောက်ရဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာတွေကို တင်ပြရအုန်းမည်”ဟု ပြောသည်။
Latest posts by webmaster (see all)
ခွဲခြားမှုတွေကိုပါ တစ်ပါတည်းတွန်းလှန်နေကြတဲ့ သက်တန့်ရောင်တွေရဲ့တိုက်ပွဲ - 17/05/2022
ပညာရေးအလှမ်းဝေးမှာကို ပူပန်နေရတဲ့ မိခင်များ - 15/05/2022
မွေးရပ်မြေကိုစွန့်ခွာချိန် - 12/05/2022
ခွဲခြားမှုတွေကိုပါ တစ်ပါတည်းတွန်းလှန်နေကြတဲ့ သက်တန့်ရောင်တွေရဲ့တိုက်ပွဲ
ပညာရေးအလှမ်းဝေးမှာကို ပူပန်နေရတဲ့ မိခင်များ
အသွေးအသားကိုစတေးကာ အာဏာရှင်ပြုတ်ကျဖို့ တော်လှန်နေတဲ့မိခင်ကြီး
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရကာ ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ
ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နေကြဆဲ မီးရထား CDM ဝန်ထမ်းများ
အမျိုးသမီးရေးဆိုင်ရာ သတင်းဆောင်းပါး၊ ဓာတ်ပုံ၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်းများ ပေးပို့လိုပါက hinews.bwu@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
“အမျိုးသမီးများနဲ့ ကလေးငယ်များဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအရသာခံစားဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်”
၈၈ မှသည် ၂၁ ထိ မပြီးဆုံးသေးသောအာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ဖြတ်မည့် တိုက်ပွဲဝင်အမျိုးသမီးများ
သွေးစက်တွေကြား ကြေကွဲစွာ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ မိခင်များနေ့
သမိုင်းစာမျက်နှာတွင် တင်ကျန်ရစ်မည့် အာဇာနည်အမျိုးသမီးများ
အမျိုးသမီးများကို မဲပေးခြင်းဖြင့် လွှတ်တော်အသီးသီးရဲ့ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ကြပါစို့
“ကရင်အမျိုးသမီးများ၏ တော်လှန်ရေးအတွက် စွမ်းဆောင်မှုများ”
LGBTIQ’s spring revolution
The moment of “Mother’s Day” in Myanmar
“Long way to go in the finding of justice”
A Diary to Remember Women’s Contributions in the Revolution to End the Military Dictatorship in Burma
Mom, are police and soldier bad guys?
“နွေဦးတော်လှန်ရေးခရီးစဉ်အတွင်းက တော်လှန်သူအမျိုးသမီးများရဲ့ မှတ်တမ်း ”
“အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အတွက် စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးများ၏ ရင်တွင်းစကားသံများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များ”
ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဒေသများမှ အမျိုးသမီးများရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် သဘောထားအမြင်များ
သိမ်းဆည်းထားမှု Select Month May 2022 April 2022 March 2022 February 2022 January 2022 December 2021 November 2021 October 2021 September 2021 August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014
Hi Burma အကြောင်း
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် အမျိုးသမီး အသံများကို ဖော်ထုတ်ရာနေရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသံတွေကို အဓိကထား ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ မီဒီယာတွေ နည်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အကြမ်းဖက်ခံရတာတွေ၊ မတရားတာတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း ယဉ်ကျေးမှု အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဖော်ပြပေးရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင်နဲ့အတူ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရမယ့် ခွဲခြားနှိမ်ချမှုတွေ
TNLA ပေးတဲ့ အကြွေးနွံထဲနစ်ခဲ့ရတဲ့ မိုးကုတ်မြို့က အမျိုးသမီး
မမီးမီး (၈၈) ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနား မြင်ကွင်း (၁၇. ၈ . ၂၀၁၈)
ဝမ်းရေးနဲ့သြင်္ကန် (ရန်ကုန်) Livelihood and Thingyan (Yangon)
မူပိုင်ခွင့် @၂၀၂၀ - Hi Burma Honesty Information
ရခိုင်ရိုးရာ ဝါးထည်ရက်လုပ်ခြင်းပညာရပ်ကို ထိန်းသိမ်းနေသူ
ကျောင်းထဲက ကာယိန္ဒြေထိပါးအောင် နှောက်ယှက်မှုများကို မဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာအသစ်များကို မဖိတ်ခေါ်ပါနှင့်